China Sifihle igobolondo elingangeni manzi isikhwama sokulala samasosha sokulala sefektri ebanda kakhulu yezulu nabakhiqizi | Xueruisha
Lolu hlobo lwesikhwama sokulala lusetshenziselwa kakhulu amatende angaphandle ngaphansi kwezimo ezifudumele. Lokhu kungenxa yokuthi inhloso yasekuqaleni yalolu hlobo lokuklama kwesikhwama sokulala ukuhlangabezana nezidingo zabantu zokunethezeka kwekamu langaphandle kuze kufike ezingeni eliphezulu, okuholela ekulahlekelweni kokushisa okwengeziwe. Lolu hlobo lwesikhwama sokulala lungasetshenziswa njengomqamelo ngokuvula uziphu.
Ngabe uvuke ngobusuku obubandayo? Uma ulele esikhwameni sokulala etendeni, uqhaqhazela, uqhaqhazela, ungakwazi ukulala kalula ngenxa yamakhaza, ulalele umoya obandayo ngaphandle, imvula neqhwa, ingabe ufuna ukuthi isikhwama sokulala esinjalo sikuvumele ukujabulele ukufudumala lapho ulele kubanda kakhulu? Manje, sekuyisikhathi sokuthi wenze isinqumo esifanele. Lesi sikhwama sokulala sifihlekile futhi sakhiwe ngokusho kwesikhwama sokulala somama. Indwangu engaphandle yenziwe ngendwangu yephethini yokufihla, eye yaphathwa ngemithi yokuqeda izinyembezi kanye neyokuxosha amanzi. Inokumelana okuhle nomoya, imelana kakhulu nokungcola futhi akulula ukulimaza. Indwangu yangaphakathi ithambile futhi intofontofo, futhi izizwa isondelene kakhulu nomzimba. Ukucaciswa okuyisisekelo kwalesi sikhwama sokulala kugcwaliswe nge-90% yedada phansi kwe-1600g, futhi i-bulkiness ingama-650. Inqwaba ephezulu nenqubo yokufaka i-3D yenza isikhwama sokulala sigcwale kakhulu, kanti phansi kugcwalisa i-interlayer, okungcono ukugcina kufudumele . Isigqoko sisebenzisa ibhakede eliqine kakhulu, elingagoqa ikhanda ngokuqinile futhi likuthuthukise kakhulu ukusongwa jikelele, okungakunika ukufudumala endaweni ebanda kakhulu. Lesi sikhwama sokulala singasetshenziswa ezindaweni ezibandayo kakhulu ngaphandle kwenkinga, ngakho-ke kufanelekile ngezimo ezahlukahlukene, ezinjengekhempu lasekhaya, amapikiniki, izintaba, ucwaningo lwesayensi ezindaweni ezibandayo, umsebenzi, ukumasha, nokumelana namakhaza amakhulu futhi umoya. Uma unesithakazelo kulesi sikhwama sokulala, kepha imininingwane yesikhwama sokulala ayihlangabezani nezidingo zemakethe yakho, lapho-ke ungafika uzoxhumana nathi. Lesi sikhwama sokulala sisekela ukwenza ngokwezifiso okujulile. Ungakhetha indwangu nokugcwaliswa kwesikhwama sokulala ngokuya ngezidingo zakho. Unganamathisela i-LOGO noma amaphethini ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende kumakethe yakho yokuthengisa. Wamukelekile ukubonisana nokuhleleka.
Langaphambilini Ukuthengisa okushisayo kakhulu izikhwama zokulala zomama ezingangeni umoya ezingangeni kubazingeli bezempi
Olandelayo: Imvilophi Eyodwa Isikhwama Sokulala Esinombala Oqinile weSentwasahlobo neKwindla
Hot ukuthengisa kakhulu amanzi oxosha mu muya ...